1 Mose 3 ASCB – 1 Mose 3 AKCB | Biblica
1 Mose 3 ASCB – 1 Mose 3 AKCB
Bɔne A Adam Yɛe Ne Akyi Asɛm
1Na ɔwɔ yɛ ɔdaadaafo wɔ wuram mmoadoma a Awurade Nyankopɔn abɔ wɔn no nyinaa mu. Ɔwɔ no kɔɔ ɔbea no nkyɛn kobisaa no se, “Enti ɛyɛ ampa ara sɛ, Onyankopɔn se, ‘Munnni turo yi mu aduaba biara?’ ”
2Ɔbea no buaa ɔwɔ se, “Yetumi di nnua a ɛwɔ turo yi mu no so aduaba biara, 3nanso Onyankopɔn kae se, ‘Ɛnsɛ sɛ yedi dua a esi turo no mfimfini no so aduaba, na ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn nsa mpo ka, anyɛ saa a yebewu.’ ”
4Na ɔwɔ no ka kyerɛɛ ɔbea no se, “Morenwuwu. 5Mmom, Onyankopɔn nim sɛ, da a mubedi no ara pɛ, mo ani bɛba mo ho so, ama moayɛ sɛ Onyankopɔn, na moahu papa ne bɔne.”
6Bere a ɔbea no huu sɛ dua a esi mfimfini no so aba no wodi a, ɛbɛyɛ yie, na ɛyɛ akɔnnɔ, na afei ɛtew ani no, ɔtew bi dii, de bi maa ne kunu a na ɔne no wɔ hɔ no, maa ɔno nso dii. 7Wodi wiee no, wɔn baanu ani baa wɔn ho so, na wohuu sɛ wɔn nyinaa da adagyaw. Enti wɔkekaa nhaban sisii anim, de kataa wɔn adagyaw so.
8Da no anwummere, wɔtee Awurade Nyankopɔn nka sɛ ɔnam turo no mu; enti Adam ne ne yere Hawa de wɔn ho kosiee nnua a ɛwɔ turo mu hɔ no mu sɛnea Awurade Nyankopɔn renhu wɔn. 9Na Awurade Nyankopɔn frɛɛ Adam bisaa no se, “Mowɔ he?”
10Adam buae se, “Metee wo nka wɔ turo no mu hɔ, nanso na misuro, efisɛ na meda adagyaw nti mekɔtɛwee.”
11Na Onyankopɔn bisaa no se, “Hena na ɔka kyerɛɛ wo se na woda adagyaw? Woadi dua a meka kyerɛɛ wo se nni so aba no bi ana?”
12Adam kae se, “Yiw, nanso ɔbea no a wode no maa me sɛ me ne no ntena no na ɔde aduaba a ɔtew fii dua no so no brɛɛ me maa midii.”
13Enti Awurade Nyankopɔn bisaa ɔbea no se, “Dɛn na woayɛ yi?”
Ɔbea no buae se, “Ɔwɔ no na ɔdaadaa me ma midii.”
14Enti Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ ɔwɔ no se, “Esiane saa ade a woayɛ yi nti,
“Wɔadome wo wɔ mmoa
nyinaa ne nkekaboa mu.
na wo nkwanna
nyinaa woadi mfutuma.
wo ne ɔbea no
ne wʼasefo ne nʼasefo ntam.
Ɔno na ɔbɛbɔ wo ti,
16Afei, Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ ɔbea no nso se,
“Wobɛte ɔyaw pa ara wɔ wʼawo mu;
ɔyaw mu na wobɛwo mma.
Eyi nyinaa akyi no,
wʼani begyina wo kunu na obedi wo so.”
17Onyankopɔn ka kyerɛɛ Adam nso se, “Esiane sɛ wutiee wo yere asɛm, na wudii dua a mehyɛɛ wo se, ‘nni so aba no’ nti,
na ɔbrɛ ne ɔhaw mu na wubedidi so
wo nkwanna nyinaa.
18Ebefifi nsɔe ne nkyɛkyerɛ
ama wo na woadi wuram nhaban.
19Wubesiam wʼanim fifiri
ansa na woanya aduan adi,
kosi sɛ wubewu akɔ dɔte mu,
efisɛ dɔte no mu na menwen wo fii;
na dɔte mu na wobɛsan akɔ.”
20Adam too ne yere no din Hawa, efisɛ ɔno na ɔbɛyɛ ateasefo nyinaa na.
21Awurade Nyankopɔn de aboa nhoma yɛɛ ntade maa Adam ne ne yere Hawa de kataa wɔn ho. 22Awurade Nyankopɔn kae se, “Afei, onipa no abɛyɛ sɛ yɛn ara a, wahu papa ne bɔne. Ɛnsɛ sɛ yɛma no kwan na ɔteɛ ne nsa kɔtew nkwa dua no so aba no bi di, na ɔtena ase afebɔɔ.” 23Enti Awurade Nyankopɔn pam no fii Eden turo no mu sɛ ɔnkɔyɛ adwuma wɔ asase a wɔnwenee no fii mu no so. 24Ɔpam onipa no, ɔde Kerubim ne afoa a ɛdɛw twaa ne ho fa baabiara no sii Eden turo no apuei fam sɛ ɛnwɛn ɔkwan a ɛkɔ nkwa dua no ho no.
AKCB : 1 Mose 3